Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Premier League Ee Kooxaha Fulham v Manchester City. - jornalizem
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh Ee Premier League Ee Kooxaha Fulham v Manchester City.
Manchester City ayaa raadineysa inay ka soo kabsato dhabarjabkii ugu danbeeyay ee ay kala kulmeen labadii kulan ee ugu danbeysay ee Premier League oo ay barbaro 1-1 ah la galeen kooxaha Stoke City iyo Arsenal, halka Aston Villa ay ka reebtay koobka League Cup.
Kulanka: Fulham v Manchester City
Garoonka: Craven Cottage
LINE-UPKA MACQUULKA AH:FULHAM
Tababaraha kooxda Fulham Martin Jol ayay u badan tahay inuusan wax bedel ah ku sameyn doonin line-upkiisii uu kaga badiyay Wigan isbuucii hore, inkastoo Dimitar Berbatov uu dhaawac kaga maqnaanayo kulanka ay maanta la ciyaarayaan kooxda Manchester City.
Giorgos Karagounis ayaa ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii ka dhacay DW Stadium isbuucii hore, lakiin waxaa laga yaabaa inuu kulankiisii ugu horeeyay u ciyaaro Fulham maanta madaama Mahamadou Diarra, Simon Davies iyo Kieran Richardson ay dhamaantood dhaawac kaga maqan yihiin khadka dhexe.
Kerim Frei iyo Ashkan Dejagah ayaa labadoodaba dhaawac yar la dhibtoonaya, halka Philippe Senderos uusan weli taam ahaanshihiisa buuxa helin.
Dhanka kale Mancini ayaa 10 bedel ku sameeyay line-upkiisa kulankii ay guuldarada ka soo gaartay League Cup ee Aston Villa, waxaana ay u badan tahay inuu soo ceshan doono ciyaartoydiisa waa weyn kulanka ay maanta ku ciyaarayaan galbeedka London.
City ayaa seddex difaac ciyaartay kulankii arbacada lakiin waxa ay u badan tahay inay u soo noqon doonaan afar daafac iyadoo Vincent Kompany uu ka garab ciyaari doono Joleon Lescott.
Samir Nasri ayaa dhaawac kaga maqnaanaya khadka dhexe, sidaasi darteed Scott Sinclair ayaa ka sii ciyaari doona khadka dhexe ka dib markii uu ka soo muuqday kulamadii Stoke iyo Arsenal ee dhawaan, halka Maicon iyo Richards oo dhaawac ah ay u saamaxeyso Pablo Zabaleta inuu ku dhego booskiisa daafaca midig.
Fulham ayaa laga badiyay kaliya hal kulan oo ka mid ah 13kii kulan ee u danbeysay ee Premier League ee ay ku ciyaareen Caraven Cottage.
Kooxda Martin Jol ayaa ku riyaaqday rikoor fiican oo ku aadan kooxaha lixda ah ee ugu sareeyay horyaalka xilli ciyaareedkii hore ee soo booqday garoonkooda, waxa ay badiyeen labo kulan, waxaa laga badiyay labo kulan, labo kulana barbaro ayay galeen.
Giorgos Karagounis ayaa hal gool u jira goolkiisii 50aad ee ciyaar horyaal ah, isagoo ka soo ciyaaray dalkiisa Gariiga, Serie A iyo horyaalka Portugal.
Manchester City ayaa badisay kaliya hal kulan lixdii kulan ee u danbeysay ee tartamada oo dhan.
Kooxda Sky Blues ayaa qaab ciyaareed aan caga badan ku taagneyn kala hortagtay kooxaha London xilli ciyaareedkii hore, waxa ay badiyeen labo kulan, lakiin waxaa laga badiyay labo kulan halka kulan ay barbaro galeen waana kulankii ay booqdeen Fulham.
Joe Hart ayaa u baahan seddex kulan kale oo uu shabaqa ilaashado waxaana uu gaari doonaa kulankii 100aad ee aan gool laga dhalinin intii uu koox u soo ciyaarayay mustaqbalkiisa ciyaareed.
City ayaa heysata faa’ido taariikheed iyagoo Fulham ka badiyay 26 kulan halka Fulham ay badisay 17 kulan, 16 kulana barbaro ayay ku kala baxeen.